Ukumaketha: Ukuqondanisa Amaqembu Wakho Wokuthengisa ne-B2B Wakho | Martech Zone
Ngolwazi nobuchwepheshe ezandleni zethu, uhambo lokuthenga lushintshe kakhulu. Abathengi manje benza ucwaningo lwabo kusenesikhathi ngaphambi kokuba bakhulume nommeleli wezentengiso, okusho ukuthi ukumaketha kudlala indima enkulu kunakuqala. Funda kabanzi ngokubaluleka "kokumaketha" ibhizinisi lakho nokuthi kungani kufanele uqondanise amaqembu akho okuthengisa nawokumaketha.
ISmarketing ihlanganisa ukuthengisa kwakho kanye namaqembu wokumaketha. Igxila ekuqondaniseni izinhloso nokuthunywa okuzungeze imigomo yemali evamile. Lapho uhlanganisa la maqembu amabili ochwepheshe ndawonye, ​​uzofinyelela:
Amanani wokutholwa kwamakhasimende angcono
Ukugcinwa kwemali okuthuthukisiwe
Kungani Inkampani Yakho Ifuna Ukutshala Imali 'Ekumaketheni'?
Ukungahleleki kahle kwamaqembu akho wokumaketha nokuthengisa angenza okubi kakhulu kunalokho ongakubona. Ngokwesiko, la maqembu abantu ahlukaniswe ngamasilo amabili. Yize imisebenzi yabo yehluke kakhulu, izinhloso zabo ziyefana ekugcineni - ukuheha amakhasimende amasha futhi unake nomkhiqizo wabo.
Uma kushiywe kuma-silos abo, iminyango yezokumaketha neyokuthengisa iphikisana nomunye nomunye. Yize uma ubahlanganisa, izifundo zikhombisile ukuthi ungabona ukwanda kwemali engama-34% kanye nokwenyuka okungama-36% ekugcineni amakhasimende.
Kungani? Ngoba lokhu kuhlanganiswa kwamaqembu kwenza inkampani yakho iqonde amakhasimende akho kangcono, ngaleyo ndlela yazise ukwakhiwa kokuqukethwe, izikhangiso kanye nokufinyelela kwabathengi ngezindlela ezithuthukisa ukuqwashisa. Indima ngayinye igcwalisa enye.
Ochwepheshe bezokumaketha baqoqa idatha yokuqonda kwamakhasimende futhi bathuthukise okuqukethwe okusiza inqubo engenayo yokuhola engenayo. Ukusuka lapho, iqembu lokuthengisa ligijima nalezi zihola ekuqedeleni ukufinyelela futhi lihlanganyele ngqo namakhasimende angaba khona. Njengoba ukwazi ukubona, kunengqondo ukuthi la maqembu abe ekhasini elilodwa.
Ukugxila kubukhulu beKhasimende
Uma unemodeli yebhizinisi egxile kumakhasimende, uvame ukuba sendleleni eya isu lokuwina. Akufanele ugxile kulokho amaqembu akho wokuthengisa nokumaketha angakwenzela ibhizinisi lakho. Esikhundleni salokho, kufanele ngabe uzama ukuthola ukuthi bangazinakekela kanjani izidingo zamakhasimende akho. Ukuqinisa umugqa wakho ophansi, hlanganisa amaqembu akho okuthengisa nawokumaketha ndawonye ukukhomba izindlela zokufeza izicelo zezithameli zakho nokunikeza izixazululo kumaphoyinti abo obuhlungu.
Ukuvumelanisa ukuthengisa nokumaketha ngenhloso eyodwa kungaholela ku:
Imali engenayo engama-209% ngaphezulu evela ekumaketheni
Ukusebenza kahle okungu-67% uma kukhulunywa ngokuvala amadili
Ukusetshenziswa okungcono kwezinto zokumaketha
Ubuwazi ukuthi ama-60% kuya kuma-70% azo zonke izinto zokumaketha ezenziwayo azisebenzi? Kungenxa yokuthi, uma ungasebenzisi amaqhinga wokumaketha, abantu abakha okuqukethwe emnyangweni wakho wokumaketha abaqondi ukuthi abadayisi bakho badingani.
Ukubambisana Nenkampani Engakusiza Usebenzise Ukumaketha Emsebenzini Wakho
Lapho uhlola abathengisi abanikeza ikhono lokuthuthukisa imizamo yakho yokumaketha futhi uhlanganise amaqembu akho okuthengisa nawokumaketha ndawonye, ​​funa inkampani ethatha indlela ephelele ekuhlangenwe nakho kohambo lwamakhasimende. Ufuna ibhizinisi elenza, lithumele futhi liphathe inqubo yokuthengisa ngezindlela ezinengqondo ngomkhiqizo wakho namakhasimende ozama ukuwaheha.
Khumbula, yonke indawo yokuthinta phakathi kwebhizinisi lakho nezithameli zakho ibalulekile. Kusuka kusiqu sokuhola kuya ekuvuselelweni kwamakhasimende, kuhlale kunethuba lokwakha umuzwa oyingqayizivele owakhelwe ezethembeni, ukwethembeka nemiphumela.
Konke kumayelana nokuqeqeshwa okuhle, amathuluzi nezinqubo ezisezingeni lomhlaba, nokuzimisela ukushintsha indlela ohlale wenza ngayo izinto ukuze ibhizinisi lakho lithuthuke. Ithimba lethu kwaServiceSource abaholi bezixazululo ezithunyelwa ngaphandle zezinkampani, ukuze zixhumane nochwepheshe xhumana nathi namuhla.
Tags: ukuqondanisainfographicukuqondanisa kokumakethaukuqondanisa kokuthengisaukuthengisa nokumakethaukuqondanisa kokuthengisa nokumakethainsiza yomthomboukumangaza